Vidiyo ime ụlọ China P2 N'èzí Mgbidi Hd Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbanwe Eserese Ngosipụta Ngosipụta Nrụpụta na Ụlọ nrụpụta | EYELED
P2 N'èzí Video Video Wall Hd Tv Mgbasa Ozi Mgbanwe Eserese Ngosipụta ihuenyo
Ngwa: Ime ụlọ/n'èzí/mgbasa ozi/TV
Agba: Agba zuru oke, agba zuru oke
Size Panel: 258mm*128mm*160mm
Oghere Pixel: 2mm
Nọmba Model: p2 duru ngosi na -agbanwe agbanwe
Aha akara: OTOPYYK
Aha ngwaahịa: Ogwe vidiyo P2 ime ụlọ Mgbasa Ozi Mgbanwe Mgbanwe Esemokwu Dị Mfe
Ojiji: Ngosipụta ime ụlọ na -agbanwe agbanwe
Nkọwapụta LED: SMD1921
Mkpebi pixel: (W) 64*64 (H)
Nkezi ike: 250W/㎡
Ibu arọ: 0.65KG
Akuku nlele kacha mma: kwụpụrụ> 170 Celsius kwụ ọtọ> 120 Celsius
Ogologo ndụ: 100000 Awa
P2 Vidiyo ime ụlọ n'èzí Wall Hd Tv Mgbasa Ozi Mgbanwe Eserese Ngosipụta Ngosipụta
Aha ngwaahịa P2 Vidiyo ime ụlọ n'èzí Wall Hd Tv Mgbasa Ozi Mgbanwe Eserese Ngosipụta Ngosipụta
Agba agba zuru oke
Ogologo ndụ Oge awa 100000
Nkezi ike 250W/㎡
ịchekwa ume, na imewe nnukwu voltaji nwere ike iji na mpaghara dị iche iche.
Nhazi nke injinịa na-eji ihe eji eme ihe n'ozuzu iji dochie ihuenyo tụgharịrị akụkụ atọ ozugbo na-etinyeghị nchara ọ bụla. Ntinye dị ọkụ na ngwa ngwa, na -azọpụta akụrụngwa na -ewu ụlọ yana ụgwọ ọrụ.
Okwu mmalite ojiji ngwaahịa
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ eletrọnịkị, LEDs na -akawanye mma mgbe niile. Ihe ngosi ọkụ ọhụrụ LED nwere ike ịwụnye ngwa ngwa, omume gburugburu ebe obibi, ịchekwa ume, kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi. Njirimara nwere ọgụgụ isi na -enweghị mmezi akwụkwọ ntuziaka.
Nkọwa nke mmetụta ojiji ngwaahịa
Arụrụ ọrụ siri ike na ntụkwasị obi: Nke mbụ bụ obere ike oriri. Ngwaahịa anyị na-eji ihe dị oke egwu. Kabinet bụ
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ imewe aluminom niile, na arụmọrụ mgbasa ọkụ na-emeziwanye site na 80%. Nke abụọ bụ mmiri na -adịghị. Ngwaahịa anyị na -anabata ihe niile. Nhazi usoro gluing.
Windo, mgbidi ákwà mgbochi mgbidi, mmanya, akpaaka show, entertainmet, ámá egwuregwu, hotel, mgbazinye agbamakwụkwọ, ogbo, ngosi nka, ngosi, ahịa center, ụlọ ahịa ahịa, sinima, et.
anyị nwere ike ịnye gị ihe kacha mma, ọnụ ahịa asọmpi na onye na -eweta ahịa kacha mma. Ebe anyị na-aga bụ “Ị ji nsogbu bịa ebe a, anyị na-enyekwa gị ọnụ ọchị ịwepụ” maka ụlọ nrụpụta mere ọkụ ọkụ China LED Transparent Screen Display for Glass Wall, Ụkpụrụ azụmahịa anyị na-abụkarị ịnye ngwọta dị mma, ọkachamara ụlọ ọrụ, na ezi nkwurịta okwu. Nabata ndị enyi niile ka ha tinye usoro ikpe maka imepụta mmekọrịta ọgbakọ na-adịte aka.
Ụlọ ọrụ mere ire ọkụ China Ngosipụta LED na ọnụahịa ihuenyo LED, A na-ebuga ngwa ahịa anyị na Europe, Africa, America, Middle East na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na obodo na mpaghara ndị ọzọ. Anyị enwetala aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị maka ezigbo azịza na ezigbo ọrụ. Anyị ga -eme enyi na ndị ọchụnta ego si n'ụlọ na mba ofesi, na -eso ebumnuche nke "Ogo mbụ, nkwanye ugwu mbụ, ọrụ kacha mma."
Nke gara aga: P1.875 p1.935 p2.4 p2.5 ime ụlọ & n'èzí arụnyere nrụnye butere ngosi p2 p3 p3.75 ihu ọrụ butere ihuenyo.
Osote: Ihuenyo Ihu Mgbanwe Eserese Mpụga Ihe Ntanetị P3.91 Ngosipụta Ahịa Ngosipụta Dị Mfe
Waterproof N'èzí 960X960 Die-Nkedo Magnesium A ...
SMD P31 N'èzí Waterproof Nnukwu Commercial Adv ...
HD mgbanwe transperent iko mere ngosi n'ime ...
HD mgbanwe transperent iko ada ngosi/Outdo ...
P5 Portable Digital Full Agba 4k Mini ákwà mgbochi ...
Mgbanwe duga ákwà mgbochi ngosi kabinet shenzhen-M ...